Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Akụkọ Mgbasa Ozi Hawaii » Ala ọma jijiji 6.1 nwere n'agwaetiti niile
Na-agbasa News Travel • Akụkọ Ọchịchị • Akụkọ Mgbasa Ozi Hawaii • News • Tourism • Mmelite nke Njem njem • Akụkọ Mgbasa Ozi Njem • Akwụkwọ akụkọ USA
Ọ naghị eme ọtụtụ mgbe na ala ọma jijiji na steeti Hawaii ka a na -ahụ n'agwaetiti niile.
N'ehihie a, otu nnukwu kụrụ na ndịda Big Island nke Hawaii.
A tụrụ ala ọma jijiji 6.1 n'ebe ndịda Big Island nke Hawaii n'ehihie a
Ebe etiti ala ọma jijiji bụ kilomita 17 na ndịda Big Island nke Hawaii, mana enwere mmetụta na steeti niile
Ọdụ ụgbọ elu na ọdụ ụgbọ mmiri niile dị na steeti Hawaii na -arụ ọrụ
Nnukwu agwaetiti, ọkachasị mgbe ntiwapụ nke ugwu mgbawa ka amaara maka obere ala ọma jijiji mgbe niile.
Taa Otú ọ dị, 6.1 bụ ike a na -atụtụbeghị na ya Aloha Steeti.
Ndị bi na ndị ọbịa ruo Honolulu kwuru na ala ọma jijiji n'ehihie a.
Enweghị akụkọ mmerụ ahụ ma ọ bụ nnukwu mbibi n'oge a.
Enweghị mkpamkpa mbufịt, mana USGS na -enyocha ọnọdụ a.